Ụgbọ elu Geneva na New York na SWISS na United Airlines ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Geneva na New York na SWISS na United Airlines ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu Geneva na New York na SWISS na United Airlines ugbu a.
A na-achọsi ike iji si United States gaa Switzerland, nke a bụkwa ozi ọma maka ma ndị njem ntụrụndụ ma ndị njem azụmahịa.
SWISS ga-arụ ọrụ ruru ụgbọ elu anọ kwa izu na-aga JFK nke New York site na Disemba 14, 2021.
Ụgbọ elu United ga-amaliteghachi ụgbọ elu Newark-Geneva na Nọvemba 1, 2021, na-eji ụgbọ elu anọ kwa izu.
United Airlines na SWISS bụ ndị mmekọ codeshare na ndị otu Star Alliance.
SWISS International Air Lines, Onye na -ebu ọkọlọtọ mba Switzerland, ekwuputala na ọ ga -amaliteghachi ụgbọ elu n'etiti ọdụ ụgbọ elu Geneva (GVA) na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa John F. Kennedy (JFK) na ụbọchị ahọpụtara n'izu malite na Disemba 2021. SWISS ga -arụ ọrụ ruru ụgbọ elu anọ a. izu ruo JFK site na Disemba 14, 2021.
United Airlines ekwuputala na ọrụ ya n'etiti ọdụ ụgbọ elu Geneva na Newark Liberty International Airport (EWR) ga-amaliteghachi na Nọvemba 1, 2021, yana ụgbọ elu anọ kwa izu.
Ụgbọ elu abụọ ahụ bụ ndị mmekọ codeshare na ndị otu Star Alliance.
Enwere ọchịchọ siri ike maka njem na Switzerland na nke a bụ akụkọ anabatara maka ndị njem na ndị ọchụnta ego. Nke ahụ bụ eziokwu karịsịa maka ndị na-achọ ụgbọ elu ga-aga Geneva na Vaud, ógbè ndị na-asụ French n'akụkụ Ọdọ Mmiri Geneva. Mkpebi nke SWISS na United dị mkpa maka azụmahịa na njem nlegharị anya na isi obodo Lausanne, ebe obibi nke ihe ngosi ihe ngosi Olympic, yana n'obodo ndị dị n'akụkụ ọdọ mmiri dị ka Montreux na Vevey. Oge nke ọkwa ahụ dịkwa mma maka mmalite nke oge ski 2021-22 na ebe ezumike oyi, gụnyere Villars, Les Diablerets na Leysin, yana Glacier 3000.
Ụzọ dị n'etiti Geneva na New York bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu kacha nwee njikọ. Emebere ya ka agha ahụ mechara na 1947 iji jikọta ụlọ ọrụ United Nations abụọ ahụ wee rụọ ọrụ dị ka àkwà mmiri mgbagha. Taa, Geneva bụ ebe obibi karịa ụlọ ọrụ gọọmentị etiti 30 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400 NGO. Tupu oria ojoo COVID-19, mpaghara a na-akwado ihe karịrị nzukọ na nzukọ mba ụwa 3,000 kwa afọ. Ọtụtụ mba ndị America nwere isi ụlọ ọrụ mpaghara na Switzerland na-asụ French na ọdụ ụgbọ elu bụ njikọ dị mkpa n'etiti Canton nke Vaud na United States maka njem azụmaahịa na ntụrụndụ.
Tokyo weliri mmachi ụlọ nri ka ikpe COVID-19 ọhụrụ na-agbada